Xawar intaan xilka lagaa qaadin maad is casishid | allsanaag
Xawar intaan xilka lagaa qaadin maad is casishid
Ciise Xawar sharaftaadu waxay ku jirtaa inaad iska casisho xilka aad u hayso SNM .
Dhowr sano ka hor ayaan xiriir waxaan la sameeyey Allah ha u naxariistee Cawad Casharo, aniga oo doonayey inuu fariin iga gaarsiiyo ma’suul xil ka hayey Puntland, oo aan rumaysnaa inuu adeer Casharo taladiisa dhegaysanayo ama qaadnayo
Fariinta aan doonayey inaan wasiirka gaarsiiyo ayaa waxay ahayd ” adeer Wasiir Hebel Xilka ha iska casilo?” . Adeer maxaa dhacay oo uu xilka isaga casilayaa . Waxaan ugu jawaabay “adeer wasaaraddiisii, wasiir ku xigeeno, Afar agaasime ayaa laga hoos magcaabay, sidoo kale waxa wasaaradaas loo magcaabay Wasiirul dowle. Wasaaradiisii maanta agaasime ayaa awoodii ugu badanyd gacanta ugu jirtaa. Aniga oo intaa u sii raaciyey waxa fiicnaan lahayd intaan xilka laga qaadin inuu Badhan ama Dhahar tago oo xilka uu hayo isagu iska casilo. Bulshadana u sheego in wasaaraddii ay ku lahaayeen maamulka lagu soo wada qamaamay. Fariintii Wasiirkii way gaartay, waana ka dhego adaygay. Maalmo ka dibna shaqadii wasiirnimada ayaa laga eryey.
Maanta Ciise Hawar, Waa aqoonyahan dhalinyaro ah, wuxuu ka soo jeeda qoys magac leh, waa nin af gaaban oo intuu xilka hayey aan hadal ka dhicin, waa nin leh mustaqbal siyaasdaeed, sidaas awgeed waxaan maanta kula talin lahayn in xilka uu u hayo SNM iska casilo.
Sababtoo ah Ciise sidaa aad ka war hayso, xogtana aad ku hayso hadaan lagaa qarsan maalmaha soo socda waxa dhici doona dagaal u dhaxayn doona Harti iyo Isaaq. Haddii taasi dhacdona Isaaqa aad xilka aad u hayso kuguma sii aamni doonaan waa kaa qaadaayaan iyaga oo cay kuugu sii dari doona
Ugu danbayntii sababta kale oo aad xilka aad u hayso Isaaq aa isaga casilayso ayaa waxay tahay, Haddii dagaal dhaco sida dhaqanka u ahayd maleeshiyaadka SNM waxay ku xadgudbi doonaan xaquul insaanka oo sidii dhaqanka u ahayd ayeey waxay bilaabi doonaan inaay kufsadaan gabdhaah ariga la jooga ama qof safar ah o ay dilaan, maydkiisana soo bandhigaan . Taasina mustqbalkaagii wanaagsanaa iyo sharaftadii ayeey wax u dhimi doontaa hadaad ugu sii magcaaban tahay wasiirkooda dagaalka
← Soomaalida Neceb Midnimada Somaliya (SNM) SNM oo Shacab Ku Laysay Laascaanood iyo Mudaharaad Kadhacay. →